Maxaad kala socotaa isku dhaca wasiirrada musuq-maasuqa? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaad kala socotaa isku dhaca wasiirrada musuq-maasuqa?
Waxaaa bannaanka yimid musus-maasuq baahsan oo ragaadiyay Wasaaradda Cayaaaraha, kaas oo horseeday is qabqabsi xooggan oo muddo soo socday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Saddex cisho ka hor, 11 July 2021, Keydmedia Online, ayaa tabisay xogo muhiim ah oo la xariiray is qabqabsi xooggan oo ka dhex taagan Wasaaradda Cayaaraha iyo Xiriirka Olombikada, kaas oo salka ku haya musuqmaasuq baahsan oo ay ku kaceen labadii wasiir ee kala danbeeyay.
Hayeeshee, Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha, Xamza Saciid Xamza, oo soo xirayay shir looga hadlayey siyaasadda qaran ee dhalinyarada oo afar maalin ka socday Muqdisho, ayaa sheegay war lala yaabay kaas oo ah in markii loo magacaabay Wasaaradda Dhalinyarada uu waayey xafiis uu ku shaqeeyo, isla-markaana ay shaqaaaluhu ku jireen fasax ku dhawaad muddo labo sano ah.
Wuxuu xusay in aysan jirin miisaaniyad qoran oo wasaaraddu leedahay iyo xarun ay ku shaqeyso midna, halka uu carabaabay in uu aas-aaska ka soo billaabay Wasaaradda Cayaaraha oo la micno ahayd wasaarad cusub oo hadda dhidibada loo taagayo.
Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, Khadiija Maxamed Diiriye, oo ku dhawaad Afar sano ka shaqeyneysay wasaaradda Cayaaraha, ayaa dhankeeda iska difaacday eedaha, waxayna weerar ku qaadday Wasiir Xamza, iyadoo sheegtay in laga qaadi la’yahay gaari ay leedahay Wasaaradda Gaadiidka.
Wasiirka isboortiga Soomaaliya Xamza Saciid Xamza, ayaa dhawaan lagu eedeeyay in uu lunsaday lacag gaareysa $1.8 milyan oo ka timid UNFPA iyo FIFA, halka Khadiija M. Diiriye, qudheeda lagu eedeeyay lunsashada in ka badan laba boqol oo kun oo doolar oo kaash ah, intii lagu guda jiray dayactirka Stadium Muqdisho.
Labadaan Wasiir ayaa shaqada Wasaaraadaha loo kala bedelay markii xilka Ra’iisul Wasaaraha loo magacaabay Maxamed Xuseen Rooble, wuxuuna midba midka kale ku wareejiyay wasaaradda kale.